Tacliinta Gaarka ah - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Daryeelka ardayda leh baahiyo gaar ah
Waxaan ku faraxsanahay inaan u fidino barnaamij dhameystiran ardayda naafada ah - laga bilaabo dhalashada ilaa da'da 21 jir. Adeegyada waxbarashada gaarka ah waxaa laga bixiyaa dugsi kasta oo ka tirsan Degmo 834 si loo taageero ardayda buuxisa shuruudaha u-qalmitaanka Minnesota ee ardayga naafada ah.
Macallimiinteena waxbarashada gaarka ah ee daryeela, kuwa ku takhasusay cilmiga barashada luuqada hadalka, kuwa ku takhasusay shaqada iyo jimicsiga, cilmu-nafsiga iskuulka, kalkaaliyayaasha caafimaadka ee dugsiga iyo xirfadlayaal kale ayaa siiya adeegyo waxbarid iyo taageero ardayda iyo shaqaalaha u adeega ardayda.
Tacliinta Gaarka ahi waa tilmaamid khaas ah oo u gaar ah ilmaha oo aan waalidkood wax kharash ah kaga fadhiyin. Tilmaamaha waxaa loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha gaarka ah ee ilmaha naafada ah. Intii suurtagal ah, waxaan ku dadaalnaa inaan u fidino adeegyada lagama maarmaanka u ah ardayga dugsiga xaafadda. Marar yar, ardayda ayaa laga yaabaa inay u baahdaan in lagu meeleeyo goob kale oo dugsi halkaas oo adeegyo badan laga heli karo.
Adeegyadeena waxaa ka mid ah adeegyada guriga-ku-saleysan ee dhallaanka iyo socod-baradka, 1: 1 waxbarid, waxbarid koox yar, barashada fasalka guud ee waxbarashada iyo barashada ka baxsan goobta sida ay go'aamiyaan kooxda qorshaynta waxbarashada shaqsiyeed (IEP).
ku socota Agaasimaha Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Daryeelka Ardayda Gaarka ah
Waxbarashada Gaarka ah ee K-12
Waxbarashada Gaarka ah ee Carruurnimada Hore (Dhalashada da'da 2)
Waxbarashada Gaarka ah ee Carruurnimada Hore (Da'da 3-5)
Kala-guurka Buundada (Da'da 18-21)
Golaha La-talinta Waxbarashada Gaarka ah
Waxaan ugu adeegnaa ardayda leh baahiyo gaar ah meelaha soo socda:
Dib udhaca koritaanka (DD)
Dhibaato xagga hadalka / luqadda ah
Ciladda Autism spectrum disorder (ASD)
Naafada garashada koritaanka (DCD)
Cillad shucuur ama dabeecad xumo (EBD)
Dib u dhacyada ka dhasha dhaawacyada maskaxda ama naafonimada kale ee caafimaad
Ujeedada waxbarashada gaarka ah ee K-12 waa in la hubiyo Waxbarashada Dadweynaha ee Bilaashka ah iyo Ku Haboon (FAPE) ee loogu talagalay ardayda uqalma ee loo aqoonsaday inay leeyihiin naafonimo kuwaas oo u baahan barasho shaqsiyeed iyo si gaar ah loogu talagalay.
Tilmaamahan waa inuu bixiyaa horumar ku saabsan himilooyinka iyo ujeeddooyinka iyada oo loo marayo iskaashiga ka dhexeeya waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah, ardayda iyo shaqaalaha xirfadlayaasha ah ee:
Ka caawi sidii loo aqoonsan lahaa ardayda naafada ah iyadoo la adeegsanayo nidaamka kooxda maaddooyinka badan
Hirgelinta heerarka nidaamka cadaalada iyadoo lala kaashanayo Kooxda Qorshaha Waxbarashada Gaarka ah ee Ardayga (IEP)
La siiyaa ardayda tilmaamaha gaarka ah ee ku habboon barnaamijka waxbarashadooda gaarka ah (IEP), oo ku saleysan baahida la xiriirta naafonimada ilmaha
La soco horumarka ardayga iyadoo lagu saleynayo yoolalka iyo ujeeddooyinka ku qoran IEP
Si firfircoon uga qaybqaado horumarinta xirfadeed si aad u sii ahaato mid hadda leh qawaaniinta waxbarashada gaarka ah, qawaaniinta, qawaaniinta iyo hababka ugu wanaagsan ee waxbarista gaarka ah
Haddii aad ka shakisan tahay in ilmahaagu naafo yahay, la xiriir macallinka ilmahaaga, maamulaha dhismaha ama xafiiska Adeegyada Taakulaynta Ardayda oo laga helo taleefanka 651-351-8605.
Qaar ka mid ah dhallaanka iyo carruurta yaryar waxay u baahan yihiin daryeel dheeraad ah si ay wax u bartaan una koraan Dugsiyada Dadweynaha ee Stillwater Area ayaa halkan u jooga inay bixiyaan caawimaaddaas.
Adeegyada Wax ka qabashada Hore waxaa la siiyaa carruurta iyo qoyskooda markii canugga lagu arko inuu xaq u leeyahay iyadoo lagu saleynayo xaalad caafimaad ama dib u dhac ku yimid horumarka, sida ku cad shuruudaha gobolka. Adeegyadan waxay ka dhacaan guriga dhexdiisa marka ilmuhu joogo sida caadiga ah waxayna u badan yihiin qoysaska.
Adeegyada waxaa bixin kara macallinka waxbarashada khaaska ah ee carruurnimada hore, takhtarka cilmiga cudurada hadalka, daaweeyaha shaqada, dabiibka jirka iyo / ama bixiyeyaasha kale iyadoo lagu saleynayo u-qalmitaanka iyo baahida.
Ma ka walwalsan tahay koritaanka ilmahaaga?
Baaritaanka, qiimeynta iyo adeegyadu waa u lacag la'aan ardayda buuxisa shuruudaha u-qalmitaanka.
Carruurta dhalashada illaa 2 jirka:
Caawinta Minnesota ee Kobaca :
Kormeeraha Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Adeegyada waxbarashada gaarka ah waxaa la siiyaa carruurta u-qalma ee jira da'da 3 illaa laga soo galayo xanaanada carruurta kuwa buuxiya shuruudaha gobolka waxbarashada gaarka ah.
Adeegyadan waxaa badanaa lagu bixiyaa goob iskuul waxaana laga yaabaa inay bixiyaan macallinka waxbarashadda gaarka ah ee carruurnimada hore, takhtarka cudurada hadalka, daaweeyaha shaqada, dabiibista jirka iyo / ama bixiyeyaasha kale iyadoo lagu saleynayo u-qalmitaanka iyo baahida. Fasallada badankood waa 1½ ilaa 2½ saacadood, 2-4 maalmood usbuucii.
Fasallada waxbarashada gaarka ahi waxay diiradda saaraan baahiyaha gaarka ah ee carruurta, sida la xidhiidha xirfadaha da'da dugsiga barbaarinta. Adeegyada waxbarashada gaarka ah waxay sidoo kale ka dhici karaan fasalka iskuulka iskuulka isku dhafan ama iskaashiga bulshada ku saleysan, sida Head Start ee Gobolka Washington.
Da'da Caruurta 3-5:
Waxaan ku bixinaa koorsooyin waxbarasho gaar ah oo kala duwan dugsiga sare si aan u taageerno ardaydeena. Shaqaalaheena cajiibka ahi waxay gacan ka geystaan abuuritaanka qorshe habeysan oo ardayda ka caawiya inay guuleystaan.
Baadh waxyaabaha aan bixinno:
Advanced GRAD Xisaabta A & B - SEMF20 SEMF22
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Advanced GRAD Math A & B - SEMF20 SEMF22
Xirfadaha Sare ee Ingiriisiga A / B - SEL34 / 36
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xirfadaha Sare ee Ingiriisiga A / B - SEL34 / 36
Barnaamijka Isgaarsiinta iyo Isdhexgalka (CIP)
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Barnaamijka Wada Xiriirka iyo Isdhexgalka (CIP)
Xirfadaha Xisaabta Macaamilka A / B - SEMF28 / 30
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xirfadaha Xisaabta Macaamilka ee A / B - SEMF28 / 30
Xirfadaha Shaqada A / B - SEK102 / 104
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xirfadaha Shaqada A / B - SEK102 / 104
Xirfadaha Shaqada - SEK102 104
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xirfadaha Shaqada - SEK102 104
Barashada Nolosha A & B - SE3MIA SE3MIB
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Barashada Nolosha A & B - SE3MIA SE3MIB
Barashada Nolosha - Xisaabta - SEMF6 SEMF8
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Barashada Nolosha - Xisaabta - SEMF6 SEMF8
Barashada Nolosha - Qorista Xirfadaha - SEL53 SEL54
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Barashada Nolosha - Qorista Xirfadaha - SEL53 SEL54
LFL Adeegga Bulshada A / B - SEK78 / 80
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan LFL Adeegga Bulshada A / B - SEK78 / 80
Xisaabta Macaamiisha LFL A / B - SEMF9 / 11
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xisaabta Macaamiisha LFL A / B - SEMF9 / 11
Sayniska Aasaasiga ah ee LFL A / B - SECF10 / 12
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan LFL Sayniska Aasaasiga ah A / B - SECF10 / 12
LFL FACS (Fam & Consumer Sci) A / B - SEK90 / 82
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan LFL FACS (Fam & Consumer Sci) A / B - SEK90 / 82
Xirfadaha LFL ee A / B - SEK86 / 88
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan LFL Xirfadaha Waxqabadka A / B - SEK86 / 88
Xirfadaha Nolosha LFL (M) A / B - SEK74 / 76
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan LFL Xirfadaha Nolosha (M) A / B - SEK74 / 76
Barnaamijka Kala-guurka Buundada wuxuu u oggolaanayaa ardayda naafada ah ee jira 18 illaa 21-sano fursad dheeri ah oo ay ku horumariyaan xirfadaha nolosha iyo shaqada oo ay ku helaan kalsooni.
Kala-guurka wuxuu ardayda ka caawiyaa barida xirfadaha muhiimka ah iyo sahaminta waxbarashada dugsiga sare kadib iyo fursadaha shaqo. Waxay sidoo kale siinaysaa ardayda khibrado kala duwan oo bulshada dhexdeeda ah iyada oo loo marayo shaqooyin iyo mashaariic adeeg si loo ogaado waxyaabaha ay xiiseeyaan iyo go'aaminta waxa ay jecel yihiin inay sameeyaan mustaqbalka.
Nidaamka kala-guurka ee ardayda iyo Kala-guurka IEP ayaa u eegi kara arday kasta iyadoo lagu saleynayo baahida waxbarasho ee ardayga, dookha ardayga iyo yoolalka IEP.
SEAC (oo loogu dhawaaqo "raadso") waa soo gaabinta Golaha La Talinta Waxbarashada Gaarka ah, oo ah koox siisa talo ku saabsan arrimaha waxbarashada gaarka ah degmadooda iskuulka. Ujeeddadeedu waa la talin & u doodid, ee ma aha go'aan ka gaarista siyaasad. Sharciga Minnesota wuxuu farayaa degmo kasta oo ka mid ah gobolka inay yeelato SEAC inkasta oo uusan qeexin sida kooxaha loo abaabulayo ama waajibaadka ay tahay inay qabtaan. Natiijo ahaan, SEAC kastaa wuxuu yeelan karaa hadaf iyo qaabdhismeed u gaar ah.
Maxay SEACs muhiim u yihiin?
SEAC-yada maxalliga ahi waxay talo ka siiyaan degmooyinka dugsiga horumarinta barnaamijyada iyo adeegyada si loo daboolo baahiyaha gaarka ah ee edacyiga ee carruurta iyo qoysaska. Iyagoo la wadaagaya aragtidooda gaarka ah ee waxa u eg isticmaalka adeegyadan, waalidiintu waxay ka caawin karaan degmada inay waxtar badan yeelato. Natiija ahaan, natiijooyinka carruurta naafada ah waa inay hagaagaan.
Marka loo eego sharciga MN ee 125A.24 tirada xubnaha, inta jeer ee shirarka, iyo habraacyada hawlgalka waa in lagu go'aamiyaa maxalliga ah. ISD 834 ee 'SEAC' wuxuu ka koobnaan doonaa wax ka badan hal wakiil oo waalid ah dhisme walba oo iskuul ah. Xubnaha kale ee golaha waxay ka koobnaan doonaan shaqaalaha waxbarashada gaarka ah iyo maamulka. Intaas waxaa sii dheer, ugu yaraan hal xubin oo waalid u ah arday dhigta dugsiga aan dawliga ahayn ayaa laga codsan doonaa inuu xubin ka noqdo.
Si loo caawiyo qoysaska kale & carruurta naafada ah ee degmo dugsiyeedkayga
Si aan ula wadaago wixii aan soo bartay tan iyo markii uu ilmahaygu bilaabay waxbarashadiisa / waxbarashadeeda
Si aan u taageero xirfadleyda dugsiga ee degmadayda
Si aan ilmahayga ugu noqdo tusaale wanaagsan
Si aad wax ugu darsato beeshan
Si aan u barto macluumaadka iyo xirfadaha iga caawin kara inaan si wax ku ool ah ula shaqeeyo degmo dugsiyeedkayga
Si loola kulmo kuwa kale ee leh ujeedooyin isku mid ah, waalid iyo xirfadlayaal iskuulba
In la dhiso xiriir wanaagsan dadka kale ee degmadayda ku nool
Si aad aqoon dheeraad ah ugu yeelato waxbarashada gaarka ah
Si aan ula wadaago aragtidayda gaarka ah & garashada waalid ahaan
Si looga caawiyo degmada dugsiga inay si wax ku ool ah ula shaqeyso qoysaska & loo hagaajiyo natiijooyinka carruurta
Wixii macluumaad dheeraad ah fadlan kala xiriir Xafiiska Adeegyada Taakulaynta Ardayda 651-351-8309.